700 guryo qaxooti oo gubtay - BBC News Somali
700 guryo qaxooti oo gubtay
Image caption Qaxootiga magaalada Boosaaso
Shalay iyo maanta waxaa magaalada Bosaaso ku burburay in ka badan 700 oo guri, oo ay ku noolaayeen dadka qaxootiga ah ee halkaas ku dhaqan ka dib markii uu dab qabsaday waxaana dabkaasi uu guryo tiray qoysas fara badan oo haween iyo carruur ay ku jiraan.
Dadka guryo beelay ayaa la sheegayaa inay daadsan yihiin goobihii ay degganaayeen, iyadoo qaarkoodna ay magan galeen dad ay qaraabo yihiin oo halkaas ku nool.
Dabkii shalay ka dhacay Bosaaso wuxuu isu maray laba xero qaxooti, oo halkaas ku yaallay wuxuuna burburiyay 599 guri oo ay ku noolaayeen qoysas danyar ahaa oo markoodii hore ka soo barakacay koofurta Soomaaliya iyo dhulka Soomaaida Itoobiya.
Khaasaaraha ugu badani wuxuu ka dhacay xerada Biyo-kulule oo ay ku gubteen guryo ay tiradoodu gaarayso 480 guri, waxaana la sheegayaa inay jiraan dhaawacyo fudud oo dabkaas ka soo gaaray dadkii halkaas joogay qaarkood oo isku dayay inay xakameeyaan dabka.
Dabku wuxuu kaloo gaystay khasaare maaliyadeed isagoo burburiyay ganacsi yar-yar oo ay lahaayeen dadka qaxootiga ah. Maanta dabka dhacay oo isgana ka dhacay xero qaxooti oo ku taalla dhinaca xeebta ee magaalada Bosaaso, wuxuu dhulka la simay 150 guri sida ay BBCda u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahaa.
Dadkii shalay iyo kii maantaba waxaa u gurmaday oo xakamayntiisa ka qaybgalay waaxda dabdemiska ee dawladda hoose ee Bosaaso, iyo dadwayne fara badan hase ahaatee dadbku wuxuu khatar geliyay dhismayaal waawayn iyo guryaha kale ee ku dhow xeryaha qaxootiyada, iyo weliba haamo waawayn oo kuwa shidaalka lagu kaydiyo ah oo halkaas yaalllay.
Dabka ka kaca xeryaha qaxootiyada ee Bosaaso wuxuu noqday mid soo noqnoqda gaar ahaan bilaha xagaaga ee ay gobolka ka dhacaan dabaylaha xoogga leh, gaar ahaan kuwa ka dhaca magaalada Bosaaso ee Fooraha loo yaqaanno.
Wacdi Cusmaan Maxamud oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiyada ee Bosaaso oo aan telefonka kula xiriiray, ayaa sheegay in dabka ka kaca xeryaha qaxootiyaga uu khatar xoog leh ku hayo magaalada wuxuuna tilmaamayaa in loo baahan yahay in wax laga beddelo qaabka ay samaysan yihiin guryaha dadka qaxootiyada ah.
''Khatar xoog leh ayuu dabkani ku hayaa magaalada dhibaataduna waxay ka imanaysaa iyadoo ay magaalada ka dhacaan dabaylo foore ah oo xoog leh iyo guryaha oo ka samaysan buushash yar waxaana loo baahnaa in dadka qaxootiyada ah loo dhiso guryo bulkeeti ka samaysan, taas oo marar badan lagala hadlay hay'adaha, laakiin aan suuragelin maamulkuna runtii culays kuma saarin hay'adaha inay arrintaas wax ka qabtaan.''
Muddo dheer ayaa maamulka iyo hay’adaha samafalka ee gobolka ka shaqeeya waxay ka fekerayeen sidii guryo iyo degaan ku habboon loogu heli lahaa qaxootiyada Bosaaso, hase ahaatee sida muuqata weli laguma guulaysan in xal loo helo dhibaatada degaan ee qaxootiga Bosaso.
Waxaana xusid mudan inay gobolka ku sugan yihiin hay’ado fara badan oo ka shaqeeyaha arrimaha samafalka, kuwaas oo awood u leh samaynta degaanno u qalma qaxootiyada marka laga eego xagga nolosha iyo dhinaca nabadgelyadooda intaba.
Waxaa dad badani ay rumaysan yahay in ay habboon tahay in dadka qaxootiyada ah loo sameeyo degaano ka baxsan gudaha magaalada, hase ahaatee taas laftigeeda marar badan ooh ore ayaa la soo qaaday laakin ma aanay dhaqan gelin.